Tirada dhimashada ee Woqooyi-galbeed Iowa ee loo aaneeyay COVID-19 ayaa sare u kacday 13 shalay, sar | KWIT
Somali News 12.30.2020
Degmada Woodbury, waxaa jiray 55 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay. In ka badan 12,000 xaaladood oo kiisaska coronavirus ee ugub ah ayaa soo ifbaxay tan iyo markii cudurku bilaabmay. Ma jiraan wax dhimasho ah oo cusub oo ka dhacda Gobolka Woodbury, sidaa darteed tirada dhimashada halkaas waxay sii joogi kartaa 164. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan jinsi ama da 'dadka Siouxland ee shalay dhintay.
Gobolka Ida wuxuu lahaa kororka ugu weyn ee dhimashada COVID1-19. Waxaa jiray afar dhimasho oo cusub oo ka dhacday Gobolka Ida, taasoo ka dhigaysa wadarta tirada dhimashada 26. Tirada ayaa ka kacday seddex ilaa 53 gobolka O'Brien, halka labo kalena ay ka noqdeen 43 gobolka Sioux.
Meel kale, tirada dhimashadu waxay ku korortay mid ka mid ah Lyon County illaa 25, mid ilaa 12 ka ah Clay County, iyo mid ilaa 22 ka dhacay Crawford County.
Dhimashooyinkaas waxaa lagu soo warramey tirakoobka waaxda caafimaadka bulshada ee Iowa.
Iowa Republican Mariannette Miller-Meeks waxay si ku meelgaar ah u fadhiisan doontaa xubin ka tirsan Congresska 117aad Axadda. Taasi waa xitaa iyada oo haweeneyda ka soo horjeedda Dimuqraadiga Rita Hart ay sii waddo inay caqabad ku noqoto doorashadeeda.
Waxay ahayd tartankii ugu dhowaa ee federaalnimo ee ummada sanadkan.
Afhayeenka Aqalka Dimuqraadiga Nancy Pelosi ayaa shir jaraa’id oo ay maanta qabatay ku sheegtay in ay fadhiisan doonto Miller-Meeks maalinta Axadda iyada oo ay weheliyaan inta kale ee xubnaha iyo xubnaha la doortay ee Aqalka Wakiilada Mareykanka. Miller-Meeks ayaa dhaarin doonta xafiiska, laakiin dib u eegista natiijooyinka doorashada Iowa way sii socon doontaa waxayna saameyn ku yeelan kartaa xaaladdeeda.
Guddoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa soo saaray maanta shaacinta taariikhda doorashada gaarka ah ee lagu buuxinayo kursiga senet-ka gobolka Miller-Meek. Doorashada waxaa loo qorsheeyay Janaayo 26, 2021.